Imisebenzi yokuyila ngosuku lomsebenzi welinye ilizwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje uMeyi 1 ubhiyozelwa kwi Casi wonke umntu ngomhla womsebenzi wamazwe aphesheya. Usuku lokuphumla lwabo bonke ngembeko yolawulo lwabo ngexesha lokuphumla. Kukho izigidi zabasebenzi abathi namhlanje bapapashe iifoto zabo ngosuku lokuphumla kwaye bonwabele ixesha labo lesimahla. Okokuqala, ukuvuyisana! Namhlanje siza kuphonononga imisebenzi yoyilo yale nkulungwane kunye nekamva.
Le misebenzi yeyona ixhaphakileyo ngokunxulumene nexesha elizayo. Ngenxa yetekhnoloji esiyiphatha namhlanje, ezi ntlobo zemisebenzi ziya kuba zezona zibizwa kakhulu kwiintsuku zethu ngokwe Icandelo leendaba laseCambridge University.
1 Ukuba nguTuber
3 Ihlabathi lemidlalo yevidiyo alinakuphoswa
4 Umenzi feshini
Nangona ukubonwa kwabantu abathile kubuchule be YouTube kwixesha eliphakathi nelide liyintlekele, Abanye ngokwenene bacinga ukuba iya kuba yenye yemisebenzi yexesha elizayo. Iqonga le-youtube liyatshintsha. Kodwa kuya kufuneka ubone ukuba bangaphi na ngakumbi abasebenzi kwiYouTube. Kwimeko yokungabikho kokudityaniswa kwezibonelelo kunye nokukhokelwa ngumxholo oqhelekileyo (ophunyezwe kule minyaka yaba basebenzi). Inokuba yinkampani yabo bonke abaphulaphuli. Ewe kunjalo, intengiso kunye neendaba kufuneka zitshintshele kwicandelo.
Obunye ubuntu eSpain nakwamanye amazwe sele buhlala kuyo. Kwaye akumangalisi ukuba akukho lula ukufudukela kuyo 26 yezigidi zabantu njengoko usenza, umzekelo, IRubius. Konke oku, ukongeza, 'ngaphandle kokushiya ikhaya'.
Ukuqhubeka ngeziphelo ezintsha «-ER eyamkelwe esiNgesini, ngomnye ubugcisa obubambekayo. I-Creativos kwi-Intanethi inokuba ngumzekelo woku, ibhlog ekwaziyo ukufikelela kubantu abaninzi kwaye igcinwe yintengiso. Lo msebenzi wenkulungwane yamashumi amabini ananye uya usanda kwimfuno. Kwaye ukuba asijongi nje kwiiblogi eziqhelekileyo, sinokubona ukuba ibhlog zemifanekiso zikhona kanjani (I-Instagramers).
Nangona phantse nayiphi na ibhlog inokuvuselela umdla namhlanje, zininzi ezishushu. Kwibhlog ye-Actualidad zininzi iindawo ezinomdla omkhulu ezinje ngeRecetín, iActualidad Motor, iActualidad iphone kwaye kunjalo, Izidalwa ezikwi-Intanethi.
Ihlabathi lemidlalo yevidiyo alinakuphoswa
Ukuba awukadlali midlalo yevidiyo okwangoku, oko kuthetha ukuba ubuncinci ulahlekile ehlathini. Yonke imihla, kulo naliphi na iqonga, sibona abadlali kulo naluphi na uhlobo lomdlalo. Okungakumbi ngoku, xa imidlalo yodwa inika indlela kwimidlalo yabadlali abaninzi. Ukususela ekubhaleni ukuya ekuthetheni kakhulu kunye iintshaba.
Kusengqiqweni ukucinga ukuba kwixa elizayo iya kuba ngumsebenzi wobugcisa okanye omnye wabo, inkulu kwaye iceliwe zizizukulwana ezitsha. Kwaye enye yazo iya kuba Umvavanyi weVideogame. Into enokuthi kubantu abaninzi ibe liphupha, ukuvavanya imidlalo yevidiyo akukho nto ngaphandle kokuqinisekisa ukuba umdlalo wevidiyo uhlangabezana neemfuno. Kwinqanaba lomzobo, imbali, abadlali abaninzi, njl. Umvavanyi iya kuba ngumntu ophetheyo kuvavanyo lokuba le mveliso iya kwimarike ngeemeko ezifanelekileyo.
Ukuba unomdla kulo msebenzi, kwaye ufuna ukwazi ngakumbi malunga nenkqubo yokuyila imidlalo yevidiyo, kukho imisebenzi ejolise ekuqeqesheni iingcali kweli candelo. Ezinye zazo sisiDanga soPhilayo esivela kwiDyunivesithi kunye nesiDanga seMasters soYilo noPhuhliso kwiPlaystation yokuqala.
Nangona lo msebenzi sele unalo ixesha lawo, ubona ukuba unjani lo mfanekiso namhlanje, kubonakala ngathi unengqondo ngakumbi kunangaphambili.. Ngaphambi kokuba ibe yingcali yezoqoqosho. Kodwa ngoku, ngokusetyenziswa kwemidiya yoluntu kunye intsholongwane Umxholo ulawulwe ngentando yesininzi. Apha kuya kufuneka uphuhlise ubuchule obuninzi, kuba enyanisweni ayisekelwanga kwincasa ethile. Yeyona nto inzima kukhuphiswano. Apha ukuba kufuneka uzenzele ukuba ubonakale kakhulu.
Ubuncinane yile ndlela yaziwa ngayo kwifayile ye- umhlaba. Banokwaziwa njengabazingeli bokuhamba kunye neenjongo zabo kukwenza uqikelelo malunga notshintsho okanye ukuvela ngokubhekisele kwinkcubeko yokuthenga kunye nefashoni. I-coolhunter ingaphezulu kwako konke, umphandi wentlalontle, oya kuthi ahlalutye kwaye abuze indawo emngqongileyo ukuzama ukuqikelela ukuba izinto zizokutshintsha njani kwikamva elikufutshane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Imisebenzi yokuyila ngosuku lomsebenzi welinye ilizwe
Olubomvu noBlue, imibala emibini eya kukwenza ube nobuchule ngakumbi kwaye ubukrelekrele